Home > Other Languages > Somali > Fact Sheets > Dementia and Bladder and Bowel Control
Ilowga Iyo Kaadi Heysta Iyo Kontoroolka Mindhicirka
Waa maxay sababtay dadka qaba ilowgu ay ugala kulmaan dhib kontoroolka iyo mindhicirka iyo kaadi heysta?
Dadka qaba ilowga waxaa ka lumay xasuusta waxaana laga yaabaa inay wareersan yihiin oo aysan garaneynin meeshay joogaan. Tani waxay sababi kartaa ama ay sameyn kartaa in dhibaatada kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heystu ka sii daraan.
Dadka qaba ilowga waxaa laga yaabaa inay dhib kala kulmaan:
“Heynta” ilaa ay ka tagaan musqusha.
Iyagoo og inay siibka iska furan ama surwaalkooda hoos u jiidaan markay musqusha tegayaan.
Kaga maqnaanta guriga meelo aysan ogeyn meeshay musqushu tahay.
Ogaanta marka mindhicirka ama kaadi heystu ay faaruqa tahay.
Ka warqabida baahida inaad kaadido ama aad u faaruqiso mindhicirka.
Kaadinta ama furida calooshooda meelaha aan loo baahneyn inay ku furan.
Niyadjab, welwel ama cadaadis walaac leh, ama jirro, oo laga yaabo inay ka dhigaan kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta mid ka sii xumaada.
Waxa ma loo qaban karaa dadka qaba ilowga ee dhibku ka heysto kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta?
Iyadoo aysan waxba ka tareynin daawadu ilowga, waxaa jira siyaalo lagu siin karo sharfid iyo raaxoba.
Waxaa jira xeerar ballaadhan oo ah la shaqeynta si caawimaad leh dadka qaba ilowga:
Si taxadar leh u dhageyso oo ugu jawaab qofka.
Ka takhalus waxyaalaha xanibaya. Ka dhig waxyaalaha ku hareereysan kuwo sahlan oo ay yaqaanaan.
Tus xushmad iyo daryeel daacad ah.
Jeegaree kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta
Caawimaad ka raadso dhakhtarkooda, fiisiyo terabiga, ama kalkaalisada ceshadka kaadida iyo saxarada.
Kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta waxaa ka mid noqon doona baarista jireed iyo su’aalo ku saabsan marka, goobta iyo sababaha ay dhibaatooyinkani u dhaceen.
Daryeelaha ayaa badanaa ah qofka ugu fiican ee bixin kara faahfaahinta loo baahan yahay in la jeegareeyo kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta, sida:
wakhtiga uu qofku aadayo musqusha iyo/ama wax ka imanayaan;
siduu qofku u qoyan yahay:
= kastuumaha ayaa qoyan; dhexdhexaad
= goonada ama surwaalka ayaa qoyan; ama darran
= kursiga, sagxada ama sariirta ay buuxda; iyo
marka iyo siday badanaa u furan calooshooda.
Maaree kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta
Daawee waxa sababay dhibka. Dhakhtarkooda, fiisiyo teribi ama kalkaalisada ceshadka kaadida iyo saxarada ayaa kaa caawin kartaa helida waxyaalaha sababay oo tallo ka soo jeedineysa sidii loo daaweyn lahaa.
Dib u eeg daawooyinka. Daawooyinka waxaa laga yaabaa inay caawiyaan, laakiinse waxay sidoo ka dhigaan dadka kuwo wareersan, waxayna ka dhigayaan dhibaatada kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta mid ka sii xumaada.
Xaqiiji qofka hilmaanka qabaa inuu cabo 1.5 – 2 litir oo cabitaana ah maalintii (haddii aan dhakhtarku u diidin). Cabitaanka biyuhu waxay daaweyn karaan infekshinka kaadi heysta, waxay ka dhigi karaan calooshu inay si ka fiican u shaqeyso oo ay kaadi heystu caafimaad qabto. Kafeega, shaaha iyo koolaha waxay ka dhigaan in kaadi heystu noqoto kontoroolkeedu mid adag. isku day inaad jarto inta cabitaankan ah ee ay cabaan.
Daawee haloosha ku fadhida, waa inaad hubisaa inay cunnaan miro iyo khudaar faro badan, maalintii cab biyo fara badan, ahowna mid firfircoon.
Eeg calaamado inay doonayaan inay musqusha tagaan. Weydii inay musqusha isticmaalaan wakhtiyada aad u maleynayso inay badanaa aadaan ama ay badanaa qoyan yihiin. Haddii aad ogaatid wakhtiga ay tani dhacdo waxaad awoodi doontaa inaad aragto inay fiicnaato iyo in kale.
Haddii ay dhib kala kulmaan badhamada iyo siibabka, u bedel track suits, surwaalo leh dhex laastiig ah ama isticmaal Velcro.
Meesha musqusha loo sii maraa ha banaanaato. Hakaga tegin waxna wadada oo ku adkeyn kara gaadhiga musqusha. Nalka xabeenkii baa laga yaabaa inuu caawiyo. Ka dhig albaabka musqusha mid uu sahlan yahay aragtidiisu.
Ka feker isticmaalka ilaha macluumaadka ee bulshada si loogu caawiyo xamuul daryeel lah qof qaba ilowga – sida wax dhaqida, wax soo gadashada iyo daryeelka ka nasinta.
Alaabta maareynta kaadiheysta sida suufka iyo surwaalada waxaa laga yaabaa inay hagaajiyaan tayada nolosha. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho waxoogaa caawimaad ah oo aad ku daboosho kharashka alaabadan. Tallada ah haddii aad awoodo inaad hesho caawimaadan iyo noocyada alaabta ee aad heli karto waxaa laga heli karaa Khadka taleefanka Ceshadka kaadida iyo saxarada ee Qaranka. (Wecitaan bilaash ah * 1800 33 00 66). Waxyaalahan waxaa laga yaabaa inay yareeyaan inta jeer ee ay badanaa dhacaan shilalka kediska ee kaadiheysta iyo mindhicirka iyo inta xumaanteedu le’eeg tahay.
Daawadu ma caawin kartaa kontoroolka mindhicirka iyo kaadi heysta?
Waxaa laga yaabaa in la siiyo antibaayootig si loo daaweeyo infekshinka kaadiheysta.
Daaweynta bedelaada hormoonka (kiniiniga, patches ama kareemka) ayaa laga yaabaa inay sahlaan dumarka wakhtiga ma dhaleysnimada ka dib in la kontoroolo kaadiheystooda.
Kiniiniga si loo debciyo kaadiheysta ayaa laga yaabaa in la siiyo si loo dejiyo kaadiheysta kacsan, saa daraadeed si ay u keydiso kaadi badan. Tani waxay jari kartaa tirada inta jeer ee qofku u baahan yahay inuu musqusha tago.
Daawooyinka qaarkood waxay u keeni karaan kaadiheysta iyo dhibaatooyinka kontoroolka mindhicirka, ama wey sii xumeyn karaan. Daawooyinka waa inuu jeegareeyaa dhakhtar. Si uu u arko in qaarkood u baahan yihiin in la bedelo.
Daawooyinka qaarkood ee kontoroolka dhibaatooyinka kaadiheysta iyo mindhicirka waxaa laga yaabaa inay sababaan dhibaatooyin sida afka oo ku qalala, mindhicirka oo ku fadhiista, dhiilitirnaanta oo xumaata iyo tamar yari. Dadka qaba ilowga, waxaa sidoo kale jira khatar ah waxaa laga yaabaa inay aad u sii wareeraan. Isticmaalkooda daawada waxaa loo baahan yahay in dhakhtarkoodu si taxadar leh u eego. U sheeg dhakhtarka wixii ku saabsan dhibaatooyinka lay daawooyinka sababaan.
* Telefoonada laga soo diro telefoonka waxaa la iska qaada qiima aad sarreeya